पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति, नेपाल पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीच एकता हुने – ZoomNP
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति, नेपाल पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीच एकता हुने प्रकाशित मिति: शुक्रवार, मंसिर ०३, २०७३ समय - १३:२९:१४ काठमाडौं, ३ मंसिर – पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति, नेपाल पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीच एकता हुने भएको छ ।
दुई पार्टीवीचको एकताको प्रयास धेरे अघि देखि भएपनि एकता प्रक्रिया अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको उच्च स्रोतको दाबी छ । एकीकरण गरेर डा. भट्टराईलाई पुन संसदमा लैजाने प्रयास पनि भइरहेको छ । एकतापछि पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भट्टराईलाई बनाईने पनि स्रोतले जनायो ।
डा. भट्टराईले नयाँ संविधान बन्नासाथ संसदबाट राजीनामा दिएका थिए । बाबुरामलाई सांसद बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि सहमत गराइएको स्रोत बताउँछ । अहिले नयाँ शक्ति पार्टीका कोही सांसद छैनन् ।
सांसद बन्न संवैधानिक अड्चन आउने र मुद्दा समेत पर्ने देखेर बाबुरामले सांसद बन्न अप्ठ्यारो मानेको निकट श्रोत बताउँछ । अन्तरिम संविधानमा मन्त्रिपरिषद्ले सभासद मनोनीत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको तथा खाली सिट पनि राखिएको छैन ।
नयाँ शक्तिको तर्फबाट एकीकरणका लागि वार्ता गर्न पासाङ शेर्पा र देवेन्द्र पौडेल संलग्न रहेको श्रोतको भनाई छ । आगामी चुनाव अगावै दुई पार्टी एकताको घोषणा हुनेछ । चुनावमा बाबुरामले पार्टीले पहाडमा राम्रै भोट ल्याउने र तराई मधेशमा उपेन्द्रको पार्टीले राम्रो गर्ने आंकलन एकता प्रक्रियामा संलग्न नेताहरुको दाबी छ ।
आउँदो चुनावसम्ममा माओवादी केन्द्रसँग पनि एकता गर्ने उनीहरुको योजना छ । माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन पनि यो पक्षमा रहेको श्रोतको भनाई छ । अहिले नयाँ शक्तिका संयोजक भट्टराई वेलायत भ्रमणमा छन् । उनी फर्किएपछि एकीकरण प्रकृयाले थप गति लिने श्रोत बताउँछ । रिपोटर्स नेपाल बाट